ခက္ခဲလြန္းလွတဲ့ Miss Grand Myanmar 2020 အလွမယ္ ဟန္ေလးရဲ့ ဘဝအေၾကာင္း…. – Cele Oscar
အခုလို အချိန်မှာ အခု လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ တိုင်းပြည် အခြေအနေ ကို international စင်မြင့် ထက်မှာ Speak Out လုပ်ပြီး အကူ အညီ တောင်းခံပေးတဲ့ဒါမျိုးကို နိုင်ငံ ကိုယ်စား ပြုအလှမယ် ဟု ပရိတ်သတ်‌ တော်တော် များများ ချီကျူး ရှိနေ ကြတယ်။ဒါကြောင့် ဟန်လေး ရဲ့ အခက်ခဲတဲ့ ခရီးစဉ် လမ်းအကြောင်းတွေကို ဖော်ပြ ပေးချင် ပါတယ်။သူမရဲ့ နာမည် အရင်းကတော့ သော်နန္ဒာအောင် တဲ့။မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင် မြို့မှာ မွေးတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်။ ဖခင် မရှိတဲ့ ဘဝမှာ အမေ့ အရိပ် ကို ခိုလှုံရင်း ဆယ်တန်း ကို ထူးထူး ချွန်ချွန် အောင်တယ်။ဘတ်စ်ကတ်ဘော အားကစားသမား ပီပီ စိတ်ဓာတ် မာတယ်။ အရည် အချင်း နဲ့ပဲ လူတွေ ကို လွှမ်းမိုး ချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ သမိုင်းဝင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကြီး မှာ စိတ်ပညာ (ထူးချွန်) အထူးပြု နဲ့ တက္ကသိုလ်အဆောင်မှာ နေရင်း ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။
ဒီကလေးမဟာ အလှအပကြောင့် ကျော်ကြားချင်တာ မဟုတ်။ ထက်မြက်မှုကြောင့် ကျော်ကြားချင်သူ။ ပေါ်ပင် အနုပညာ အလုပ်တွေ လုပ်ရင် နာမည်ကြီး နိုင်မှန်း သိပေမယ့် သူ ယုံကြည်ချက် သည် လူတကာ အတွက် နမူနာ စံပြ အလှမယ် ဖြစ်ဖို့ သမီးလုပ်ချင်တာကို ကူညီပေးမယ့် အမေ တစ်ယောက်က လွဲလို့ အဆက် အသွယ် ဘာမှ မရှိတဲ့ ကျောင်းသူ လေးဟာ အလှမယ် ပြိုင်ပွဲငယ် လေးတွေ ကနေ ခက်ခက်ခဲခဲ တိုးရရှာတယ်။ Miss လို Model လိုလို နဲ့ ဘာမှန်း ကို မသိဘူး ဆိုတဲ့ ဝေဖန်သံ တွေတော့ သူ ရိုးနေပါပြီ။ သို့သော် သူ့အိပ်မက် ကို သူ ယုံကြည်သူ။ တစ်ချိန်မှာ သူ နိုင်ငံ့ ဂုဏ်ဆောင် နိုင်ရမယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် မြဝတီမြို့။ မော်လမြိုင်နဲ့ မြဝတီ အကူး အလူး ရှိတဲ့ သူမဟာ မယ်စကြ ဝဠာ မြဝတီကို ဝင်ပြိုင်တယ်။ ဘေးစောင်း ကြည့်တောင် ထင်ရှားတဲ့ အလှကြောင့် လူသိများခဲ့ပေမယ့် Final Night မှာ Q&A ကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကားနဲ့ ဖြေချ လိုက်ပါရောလာ City Miss တွေ ထဲမယ် ဟန်လေး – Miss Universe Myawaddy ဆိုတာ လူသိ များစ ပြုလာတယ်။တောရုပ် နဲ့ တဲ့။ တောသူမတဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ။ နယ်က လာတဲ့ ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ဟာ တောရုပ်မထွက်လို့ ဘာရုပ်ထွက်ရမလဲ။ဒါပေမယ့် မိခင်ကြီးနဲ့အတူ တိုက်ခန်းလေး ငှားနေရင်း သူ ကြိုးစားတယ်။ ပိုက်ဆံလေးတွေ စုရင်း ရိုက်ရတဲ့ Photoshoot တွေမှာ တိုးတက်လာတာကြီးပဲ။အမေးအဖြေတွေ အင်တာဗျူးတွေတိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ ယုံကြည်မှုက ၁၀၁% ပဲ။ သွက်လက်ချက်ချာမှုဟာ အလှမယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်လို သူ တည်ဆောက်တယ်။
Winner ရဖို့ မှန်းကြသူတွေ မနည်း။ကဲ Grand Slam ပွဲကြီးမှာ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အလှမယ် ဖြစ်လာတော့မယ်။ ပြင်ဆင်ချိန် ၁လကျော်မှာ သူ အကောင်းဆုံး လုပ်ဖို့ပဲ ရှိတယ်။ဘန်ကောက်ကို မသွားခင် ၂၆ ရက်အလို။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ ရွံမုန်းစရာ အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်လာတယ်။ ပုံမှန် ၁ နာရီခရီးကို လေယာဉ် ၂ဆင့် စီးရမှာနဲ့တင် ခက်ခဲနေရတဲ့ သူမဟာ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့လည်း မပျက်ကွက်ခဲ့ဖူး။အလှမယ်ဆိုတာ ဘာလုပ်ရမလဲ သူသိတယ်လေ။ ဆန္ဒပြရင်းနဲ့ပဲ ပြင်ဆင်တယ်။ Training ယူတယ်။ ပုံတွေ ရိုက်ရတယ်။ လိုက်ပို့သူ ဆယ်ယောက်မပြည့်တဲ့ အနေအထားမှာ ဒီနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာတယ်ပရိသတ်တွေမှာလည်း ရသလောက် အားပေးရရှာပါတယ်။ အင်တာနက် ဖြတ်တဲ့ ကြားက Voting တွေ ပေးတယ်။
ဒါကို သိလို့လည်း သူ့မှာ ဆယ်ဆ ပိုကြိုးစားပေးရှာတယ်။ အမိမြေမှာ လူတွေ သေနေတဲ့ သတင်းကို ကြားနေရင်း ပြိုင်ပွဲအတွက် သူ အားတင်းရတယ်။ Activity တိုင်းမှာ တက်ကြွစွာ။ညညဆိုရင်တော့ အခန်းဖော် ဖိလစ်ပိုင်မယ် နဲ့ စကားတွေ ပြောရင်း မျက်ရည်ကျရသတဲ့။ စိတ်ပူရတယ်လေ။ Stop the War and Violence ဆိုတဲ့ Motto ဟာ သူမနဲ့ မကိုက်ညီပဲ နေမလား။။ပွဲတစ်လျှောက် စစ်အာဏာရှင် တွေရဲ့ ဆိုးယုတ် မှုကို အမြဲ Speak Out လုပ်လာသူ သူမ။ ကျွန်မကို Support ပါ ဆိုတာထက် မြန်မာပြည်သူတွေကို Support ပါ လို့သာ မရဲတရဲ ဆိုရရှာသူ သူမ။ မွေးရပ် မြေ ကို မပြန်ရမှာ မကြောက်ဘူးလား လို့ မေးတဲ့အခါ ဒီမိုကရေစီမရမှာကိုပဲ ကြောက်တယ် လို့ ပြောခဲ့သူ။Final မတိုင်ခင် တစ်ပတ်လောက် အလို။ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ mobile data တွေ ဖြတ်ချလိုက်တယ်။ ပြည်တွင်းနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်ခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် ဝမ်းနည်းနေရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ပျော်စရာ နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ် သူ ယူပေးပါရစေ။
Prelim မှာ သူ ကြိုးစားတယ်။ Miss Grand Myanmar တွေထဲ အကောင်းဆုံး လို့ ပြောနိုင်တဲ့ Performance တွေကို ချပြခဲ့တယ်။ Fan တွေစကားကို နားထောင်ဖို့လည်း မပျက်ကွက်ခဲ့။မတ်လ ၂၇ ရက်။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ သူရဲကောင်း ၁၀၀ ကျော် ကျဆုံးရ။ သွေးမြေကျရ။ ခမ်းနားတဲ့ Final Night အတွက် သူများအလှမယ် တွေ အပြုံးတွေ နဲ့ တက်ကြွ နေချိန် မြန်မာ မယ်လေးဟာ ဝမ်းနည်း စရာ သတင်း တွေကြောင့် ကျတဲ့ မျက်ရည် တွေကို အနိုင်နိုင် ထိန်းနေရတယ်။ပွဲစပြီ။ အလှအပတွေ အပြိုင် အဆိုင်များ လို့ ပွဲကျပ်လွန်းတဲ့ MGI ရဲ့ Top 20။ Miss Grand Myanmar တဲ့။ ၆ နှစ်ကြာ Unplaced ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းကို သူ ချေဖျက်လိုက်ပါပြီ။ အခက်အခဲတွေ ကြားက ကြိုးစားပေးခဲ့ရသူ။ Fan တွေ ပျော်မဆုံးပေါ့။
Top 10 တော့ မပါ ပေမယ့် သူမ ကြိုးစား ထားပါသတဲ့။ ကြေကွဲ နေတဲ့ မျက်နှာ လေးကို အားတင်း ပြိုင်ရ ရှာတယ်။ ပွဲအစီအစဉ် တွေ ပြီးခါနီး။ Surprise! မြန်မာနိုင်ငံ က အကြမ်းဖက်မှု တွေအကြောင်း မြန်မာမယ်လေး ပြောပါ မယ်တဲ့။သန်းဆယ် နဲ့ ချီတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ကြည့်နေတဲ့ MGI Show ကြီးမှာ စစ်တပ်က အကြမ်းဖက် နေပုံ ပြည်သူ တွေ ခံစားရပုံ Video တွေ ဝေဝေ ဆာဆာ ကြေကွဲ စရာ ဖြစ်ရပ်များ။ နိုင်ငံတကာက ပိုသိ ကြရပြီ။ ဝတ်စုံ အဖြူ နဲ့ အလှမယိလေးဟာ မျက်ရည် တွေ ကျရင်း နိုင်ငံ အကြောင်းကို သတ္တိ ရှိရှိ ထွက်ဆိုတယ်။ အားတင်း ထားပါ မြန်မာ ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ တစ်လွှားက အသံတွေ စကားတွေ ပလူပျံလို့။ သူမ အလှမယ် တစ်ဦးအနေ နဲ့ တာဝန် ကျေတာထက် ကို ပိုခဲ့ပါပြီ။
နိုင်ငံတကာစင်မြင့် ထက်မှာ သူမရဲ့ ယုံကြည် ချက်နဲ့ ပြည်သူတွေ ရဲ့ အသံကို Speak Out လုပ်ပေး ခဲ့ပါပြီ။အလှမယ်လောကကို အထင်မှားခဲ့ ကြသူတွေဟာ အလှမယ် တစ်ယောက် ရဲ့ တနိဖိုးကို မြင်လာကြပါပြီ။ပြန်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိ။ သုံးစရာ စရိတ် မရှိတော့တဲ့ ကောင်မလေး ရဲ့ အပြန်လမ်း ဟာ မသေချာ မရေရာ။ သို့သော် ဟန်လေး လုံးဝ နောင်တမရ။ နယ်က လာတဲ့ ရုန်းကန် ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးဟာ နိုင်ငံ့အရေးကို ကမ္ဘာက သိအောင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောပြနိုင်ခဲ့ပြီ။ နိုင်ငံ့အတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေခဲ့ပြီ။ ဟန်လေး ရဲ့ အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာပါပြီ။Miss Grand Myanmar 2020 ဟန်လေးအား လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။